Wati wamboda here kuronga peji kana kutumira muWordPress uye wakanetsekana nekusagona kutsvaga nekuwana iyo posvo? Zvakadii nekungokwanisa kuwedzera posvo nyowani nyore? Zvakadii nekungokwanisa chete kuwana peji rekupinda zviri nyore? DK New MediaAnogadzira anotyisa, Stephen Coley, apedzisira apa mhinduro yekuti wese mushandisi weWordPress achada… Teleport.
Saka, kana iwe ukaona typo pane rimwe remapeji ako… ingobaya "w" uchiteverwa na "e" uye voila! Iwe wakatumirwa teleport yakananga kune mupepeti kwaunogona kugadzirisa iyo posvo uye nekukurumidza kuburitsa. Heino vhidhiyo pfupiso yekuti sei Teleport inoshanda:
Izvi zvakanaka, ndiri kuwedzera ipapo ipapo !!